Ederson Moraes tantaran'ny tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Mpilalao Football any Kameroney
Nosoratan'i Nick Pope Child Child Plus sy Untold Biography Facts
Fabio Silva Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Sergio Reguilon tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Pedro Neto Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Eric Garcia Tantara An-dReny Ankizy Miampy Untold Biography Facts
rehetraMpilalao Football any KameroneyMpilalao Football GhanianMpilalao Football any Ivory CoastMpilalao Football NizerianaMpilalao Football any Senegaly
Edouard Mendy Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Tantara Andre Onana Childhood Child Plus Untold Biography Facts
Allan Loureiro Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Gabriel Magalhaes Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Emiliano Martinez Tantara Firaisana Ankizy Miampy Untold Biography Facts
Home SORATRA FOTOTRA FOOTBALL SOUTH AMERIKA Mpilalao Football any Brezila Ederson Moraes tantaran'ny tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
SORATRA FOTOTRA FOOTBALL SOUTH AMERIKA
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny tanjona fanakanana izay fantatra amin'ny anarana; "Ny rindrina Brick". Ny tantaran'i Ederson Moraes ny tantaram-pitiavan'antoko sy ny zava-bita tsy navoakan'ny tantara dia mitondra fitantarana feno momba ireo zava-niseho mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny fanadihadiana dia midika ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny zava-misy tsy fantatra momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra momba ny tarika mitazona reflexes fa vitsy no mihevitra ny Bio Bio Edior izay mahaliana. Amin'izao fotoana izao, raha tsy misy adieu, dia aoka isika hanomboka.
Ederson Moraes Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Voalohandohan'ny fiainana
Ederson Santana de Moraes dia teraka tamin'ny andro 17Tio 1993 tany Osasco, São Paulo, Brezila. Ny famolavolana an'i Ederson dia sarotra ara-bola any Brezila. Teraka tamin'ny ray aman-dreny nahantra izy ary tsy afaka nanome baolina marobe afa-tsy ho an'ny toerana farany.
Hatramin'ny fotoana naha zazalahy azy, dia nantsoin'ny mpanazatra azy foana ny olona rehetra "The Bull". Izany dia satria baolina mena foana ny baolina kitra ary i Young Ederson dia namelatra ny fahafahana haka ny lambany.
Tonga ny fahagagana nataony rehefa nitifitra ny baolina izy tamin'ny fotoana lava be teo amin'ny baoliny lavalava izay nitifitra avy eo amin'ny boaty tamin'ny tanora. Ankoatr'izany ny fahaizany manafaka amin'ny mpitokona, nisy antso avy any Eoropa tonga noho ireo mpikaroka Benfica izay nahatonga azy ho liana be ho an'ny tanora mpiambina. Nandritra ny 16 fotsiny, nanao ny fiampitana ny Atlantika ho any Benfica i Ederson, niditra tao amin'ny tarika tanora tao Lisbonne. Nahatsiaro ho sariaka izy teo amin'ny manodidina an'i Brezila.
Ny fialan-tsasatry ny Eoropeana dia nahatonga ny fotoana ho avy. Fotoana fohy taorian'izay, i Ederson dia navela hiala tao Ribeirao ambany, rehefa afaka roa taona, niaraka tamin'ny ligin'ny Premier League Liga. Tao amin'ny klioba, izy no lasa tsara indrindra ary nanohy nandeha nilalao ho an'i Rio Ave. Tsy nila fotoana ela talohan'ny nisamboran'i Benfica azy indray izy.
Nanomboka tao amin'ny ekipa 'B' ekipa izy ary hita ho laharana iray mendrika. Ederson dia nilalao niaraka tamin'ny mpandray vaovao vaovao Bernardo Silva tao amin'ny tanora Benfica. Niatrika fanamby i Ederson rehefa nandeha tany amin'ny seranam-piaramanidina izy. Ny fanamby lehibe indrindra dia ny fisian'ny mpiray tanindrazana Julio Cesar, ilay mpitandrina mpiambina vetivety, teo anelanelan'ireo lahatsoratra.
Ny Inter Milan teo aloha dia tena fanambarana tao amin'ny 2015, nahazoana fifanarahana tamin'ny 2018. Na izany aza, rehefa tonga ny fotoana azon'i Ederson dia nalainy izany. Nanomboka ny adidiny amin'ny adim-pahaizana tamin'ilay zandriny i Cesar tatỳ aoriana.
Na dia teo aza ny fahatanorany, dia nahazo fahombiazana be i Ederson, nandresy ny Primeira Liga indroa. Indray mandeha, dia nahatalanjona ny ekipany raha nandresy an'i Zenit St Petersburg tao amin'ny Ligy Champions. Io fametrahana fifandonana naharitra telo volana miaraka amin'i Bayern Munich izay notontosaina tamin'ny Pep Guardiola. Niatrika ny mpitantana azy i Ederson Pep Guardiola satria i Benfica dia namoy ny tongony roa niaraka tamin'ilay mpitifitra nilalao tsara. Nitranga izany Pep ny fitiavana azy. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Ederson Moraes Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Relationship Life
Tena mahavariana ny vadin'i Ederson Moraes. Jereo ny Lais Moraes tsara tarehy, ilay vehivavy manamboninahitra malaza.
Efa nivady efa-taona izy ireo ary samy manana ny zanany vavy voalohany antsoina hoe Yasmin. Rehefa Ederson Nanatevin-daharana an'i Man City, ny olona dia tsy nanome azy tsara. Izy io no vadiny Lais brunette izay hijery ny mpankafy. Ireo mpifankatia roa dia mametraka sary kely mahafinaritra ao amin'ny Instagram amin'ny fifandraisana misy azy ireo.
Ny Lala Moraes tsara tarehy dia hita matetika any amin'ny seza mitsambikina amin'ny lehilahy.
Ederson Moraes Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Fiainana manokana
Ederson Maraes dia manana ny toetrany amin'ny toetrany.
Ederson Maraes Tanjaka: Izy dia mamorona, be fitiavana, malala-tanana, mafana fo, falifaly ary mazava ho azy, mahatsikaiky.
Ederson Maraes Fahalemena: Afaka ny ho saro-kenatra, miavonavona, mafy loha izy rehefa voatery.
Inona no tian'i Ederson Maraes: Azo antoka fa tia manome fanampiana ara-bola amin'ny sahirana, ny teatra, ny fialantsasatra ary ny fialamboly amin'ny namana
Inona no tsy tian'i Ederson Maraes: Tsy tiany ny tsy hiraharaha, miatrika ny zava-misy sarotra.
Amin'ny famintinana, Ederson dia mampihetsi-po, mamoron-tena, matoky tena, manan-danja ary manana olona tena sarotra ny manohitra. Miala sasatra, tena saro-kenatra izy saingy ao anaty tahaka ny liona iray misy hanoanana be. Izy no olona afaka manatratra izay tiany amin'ny sehatra rehetra iainany.
Ederson Moraes Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Tattoo
Ederson dia nanana tattoos 34 nipoitra teo amin'ny vatany. Ireo tatoazy ireo dia manana dikany isan-karazany, avy amin'ny foto-pinoana kristianina, ny baolina kitra ary ny fianakaviany any Brezila.
Manomboka eo amin'ny vozony i Ederson dia manana taolam-paty mahatsiravina manodidina ny poketrak'i Adama izay toa sahiran-dava noho ny fanosorana marevaka manodidina ny sofiny.
Ao amin'ny tratrany no ahitana ny finoana kristianina. Ederson dia manana voromailala izay manidina ambony eo amin'ny teny "An'i Jesosy aho" Izy dia mametraka rojo rojo mba hanamafisana ny finoany Kristiana.
Ny tongony dia ny Trophy'ny Ligy Portiogey, ka nahazo an'i Benfica tao amin'ny 2015.
Ederson Moraes Childhood Story Plus Untold Biography Facts -The Encounter
Ederson 2.42 mamonjy ny lalao, raha oharina amin'i Claudio Bravo 1.44, David De Gea's 1.81 ary Thibaut Courtois ' 1.52. Ny iray amin'ireo toy izany dia mitaky ny fampiasany ny rafitra mafonja sy ny asany eo amin'ny laharana araka ny sary etsy ambany.
Ity sary eto ambany ity dia mampiseho ny taorian'ilay fihaonana Sadio Mane.
Ederson Moraes Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Rehefa miresaka amin'ny reniny, raim-pianakaviana, rahalahy sy anabavy izay mahafantatra an'i Ederson tsara indrindra, dia mivoatra ny sarin'ny lehilahy milamina sy tsara fanahy. Ny fanabeazana azy dia sarotra ara-bola saingy ny ray aman-dreniny dia nitondra ny soatoavina sy ny moraly. Ederson dia avy amin'ny fianakaviana kristiana matanjaka ara-pinoana.
Zavatra iray fantatra amin'ny fianakaviany ny fahalalahan-tanana. Ederson tenany mihitsy no nanolotra ny £ 10,000 ho an'ny club club taloha Osasco vao haingana mba hanampy amin'ny fanadiovana ny trosany.
Ederson Moraes Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Karohy Karakarao
Tsy isalasalana fa i Ederson dia mpihazakazaka, mandresy lahatra, mahery fo, ary mitazona ny vatany. Manana hery ara-batana, manana reflexes tsara i Ederson sy ny fahaiza-manao mitazona fitifirana.
Namolavola ny lazany ho mpitsabo mpanavotra sazy izy tamin'ny fotoanany niaraka tamin'i Benfica. Na izany aza, heveriny fa tena miavaka tokoa ny fizarana sy ny fahaiza-manaony amin'ny baolina eo amin'ny tongony. Ny fanaraha-maso sy ny fahatokisan-tena amin'ny baolina dia ahafahan'izy ireo mihazona ny fananana ary haingam-pandeha haingana avy eny an-tanany amin'ny tanany na amin'ny tongotra na dia eo ambany fanerena aza. Na dia eo aza ny fahatanorany, dia efa niavaka izy noho ny fanapahan-keviny, ny tsy fitoviana, ary ny fametrahana tanjona, ary ny fahaizany mandamina ny fiarovany.
FACT CHECK: Misaotra ny famakiana ny tantaran-tantaran'i Ederson Moraes momba ny tantaram-pitiavana sy ny zava-misy marina momba ny zavakanto. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery ity lahatsoratra ity ianao dia mametra ny fanamarihanao na Mifandraisa aminay!.
Kasper Schmeichel Tantara momba ny fahazazan-jaza fanampiny Untold Biography Facts
Oleksandr Zinchenko Tantaran'ny Ankizy Miampy Filazana Untold Biography Facts
Joao Cancelo Tantara Firaisana Ankizy Miampy Untold Biography Facts
Brahim Diaz Tantara an-tsary momba ny tantaram-pitiavana tsy hita isa
Danilo da Silva Tantara an-tsary momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa
Ny tantaram-pitiavan'i Fabian Delph ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Ny tantaram-pitiavan'i Samir Nasri ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Milaza momba ny tantaram-pitiavan'i James Milner momba ny tantaram-pitiavana bebe kokoa momba ny tantaram-piainany
Daty efa namboarina: 16 septambra 2020
Daty efa namboarina: 13 septambra 2020
Daty efa namboarina: 10 septambra 2020
Daty efa namboarina: 9 septambra 2020
Nicolas Otamendi Fitiavana an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pitiavam-bazana
Edin Dzeko tantaram-pitiavana tantanin'ny tantaram-piainana tsy hita isa
Daty efa namboarina: 6 martsa 2019
Emmanuel Adebayor Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Leroy Sane ny tantaram-pitiavana tantanin'ny tantaram-piainana tsy hita isa
John Stones Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa